सारा विश्व कोभिड-१९ सँग जुझिरहेको छ। हात धुने र मास्क लगाउने व्यक्तिगत स्वास्थ्यका स्वच्छ व्यवहार पनि बढ्दै गएको छ। तर यो सरसफाइको क्रममा एउटा वस्तु प्राय: छुट्ने गर्छ: स्मार्टफोन।
मोबाइल फोन जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा साथीभाइको अपडेट, खेल, समाचार सबै हेर्न र पढ्नलाई फोनको स्क्रिन निरन्तर स्क्रोल गरिरहेका हुन्छौं।
औसत व्यक्तिले एक घण्टामा औसत २३ पटक अनुहार छुन्छन्। तर स्मार्टफोन त्योभन्दा धेरै छुन्छन्। अमेरिकाको इलिनोइ विश्वविद्यालयको अनुसन्धान अनुसार हामीले फोन नचलाएको क्षण बिरलै मात्रै हुन्छ।
फोहोरी स्मार्टफोनले हाम्रो सुरक्षामा ठूलो कमजोरी देखाउँछ। साबुनपानीले हात धुनलाई फोन त राख्छौं तर हात धोइसकेपछि फेरि छुन्छौं। यसले हाम्रो हातमा ब्याक्टेरिया र भाइरस फेरि सर्छन्। उसो भए हाम्रो स्मार्टफोन कति फोहोर होला? उत्तर त्यति स्मार्ट नहोला है!
एरिजोना विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले बताए अनुसार एउटा स्मार्टफोनमा ट्वाइलेटको सिटभन्दा दश गुणा धेरै ब्याक्टेरिया हुन्छ। बेलायतमा गरिएको बेग्लै अध्ययनमा १६ प्रतिशत सहभागीको हात र फोनमा दिसापिसाबमा पाइने इ कोलाइ नामक ब्याक्टेरिया भेटियो।
हङकङ विश्वविद्यालयको अर्को अध्ययनमा शिशाको सतहमा कोरोनाभाइरस दुई दिनसम्म, स्टेनलेस स्टिल र प्लास्टिकमा चारदेखि सात दिनसम्म रहने देखिएको छ। स्मार्टफोन शिशा, धातु र प्लास्टिकका पुर्जाले बन्ने भएकोले सरसफाइ नगरे अप्ठ्यारो परिणाम आउनसक्छ।
आधुनिक स्मार्टफोन प्राय: वाटर रेजिस्टेन्ट हुन्छन्। कहिलेकाहीँ साबुनपानीले धुनु खासै समस्या हुँदैन। एकै दिनमा पटक पटक धुन मन नभए ७० प्रतिशत इसोप्रोपिल अल्कोहल भएको वेट वाइप उपयोगी हुनसक्छ।
एप्पल र सामसुङले कम्पनीका उपकरणमा इसोप्रोपिल अल्कोहलको प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका थिए। एप्पलले फोनको सुरक्षासम्बन्धी अहिले परिवर्तन गरेको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले कुनै समस्या नभएको बताए पनि नियमित सरसफाइ गर्दा फोनको स्क्रिनमा ओलियोफोबिक कोटिङमा (यसले स्क्रिनलाई तेलबाट सुरक्षा दिन्छ) क्षति पुगेको केहीले दाबी गरेका छन्। सावधानीका लागि फोनमा स्क्रिन प्रोटेक्टर लगाउन सकिन्छ।
अल्कोहल वा पानी प्रयोग गर्न नचाहनेले अल्ट्रभायोलेट (युभी) प्रकाशबाट आँखाले नदेखिने किटाणुनाशक दाबी गर्ने केहि उपकरण पनि बजारमा उपलब्ध छन्। यस्ता उत्पादनलाई “युभी सेनिटाइजर” भनिन्छ। पाँचदेखि दश मिनेटसम्म यस्ता युभी सेनिटाइजरमा फोन राखे किटाणुमुक्त हुने ती उत्पादन निर्माताको दाबी छ।
युभी प्रकाश इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक विकिरण हो। आँखाले देख्न सकिने प्रकाशभन्दा यसको तरंगको लम्बाइ (वेभलेन्थ) छोटो हुन्छ। यसलाई तीन वेभलेन्थ ब्यान्डमा वर्गीकरण गरिएको छ: युभी ए, युभी बी र युभी सी। पृथ्वीको सतहसम्म पुग्ने प्रकाशलाई युभी ए भनिन्छ। युभी बीले छाला डढ्छ।
युभी सी सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। यसको प्रभाव पनि बुझिएको छ। यसले विशेषगरी न्यूक्लिक एसिड नष्ट गर्छ र ब्याक्टेरियाको डिएनएमा क्षति पुर्‍याउँछ। त्यसैले ब्याक्टेरियाले काम गर्न वा प्रजनन गर्न सक्दैन।
अस्पताल र प्रयोगशाला निर्मलीकरण गर्न युभी प्रकाश प्रयोग गरिन्छ। औद्योगिक प्रयोजनमा सूक्ष्मजीव निष्क्रिय बनाइ पानी सफा गर्नलाई युभी ल्याम्प प्रयोग गरिन्छ।
फोनसोप र स्टेराइलकेस जस्ता उपकरणमा स्मार्टफोनलाई पाँचदेखि दश मिनेटसम्म युभी प्रकाशमा राखिन्छ। फोनसोपका एक प्रतिनिधिले भने,“फोनसोपले सार्स कोभ २ नष्ट गर्नसक्छ भन्ने दाबी गर्दैन।” सार्स कोभ-२ कोभिड-१९ रोग निम्त्याउने भाइरस हो। यो भाइरस पनि इन्फ्लुएन्जा ए (एच १ एन १) जस्तै भएको र ९९.९९ प्रतिशत भाइरसलाई सतहबाट हटाउन फोनसोप प्रभावकारी हुने ती प्रतिनिधिले बताए।
इसोप्रोपिल अल्कोहलयुक्त वाइप प्रयोग गर्ने रासायनिक विधिको तुलनामा युभी सफाइ निकै ढिलो हुन्छ। युभीको श्रोत र कति मात्रामा दूषित दूषित भएको हो, त्यसको आधारमा युभी सेनिटाइजरले दश मिनेटदेखि बढी समयमा फोन सफा गर्दछ।
Published Date: Sunday, 17th May 06:15:50 AM